NASSAT | Ithempyutheni ye-Intanethi yeeTronesi-Hybrid "/"
Uxhumano lweSatellite lweeNATAT izitimela®
Izitimela eziphakamileyo kunye eziphantsi
Intanethi ye-Intanethi yeeNATAT izitimela®
I-intanethi kwiBhodi yeThuthi yeeTroke ngeWiFi
Inzuzo ecacileyo yokuncintisana. I-intanethi kwietreni sele ibe ngumgangatho omtsha wokuthuthuzela. Kubagibeli, ukuxhumeka kwe-intanethi ye-intanethi kuvumela ukusebenzisa ixesha lokuhamba. Kubaqhubi bee-train, le ntsebenzo yokhuphiswano yiphakamiso ekhangayo kakhulu yokugcina abagibeli ngokuphucula izinga labo leenkonzo ebhodini.
"Ukufikelela kwi-intanethi akukhona nje kubahambi bezoshishino ..." Iifowuni ze-Wi-Fi kunye nezixhobo ze-intanethi eziphathekayo ziya kuba yeso sixhobo esiphezulu leselula kubo bonke: abahamba ngezoshishino, abafundi kunye nabahamba ngokuzonwabisa.
Isisombululo se-intanethi kwi-Intanethi sivumele abagibeli:
Thumela uphinde ufumane imilayezo ye-imeyile eneenkcukacha
Sebenzisa iinkonzo zeVoIP njenge-Skype
Swayipha iWebhs kwaye uxoxe nge-intanethi
Ukufikelela kwi-intranet ye-intanethi ngeVPN
Inkqubo idibanisa ngokwemiqathango yeeprojekthi; I-Satellite, i-GPRS kunye ne-UMTS kunye nobuchwepheshe be-Wi-Fi ukubonelela ngonxibelelwano olusisigxina kwi-intanethi kwii-trains kuxhomekeke kwakhiwo.
I-Multimedia kwiBhodi yeeTron
I-Multimedia ebhodini yisisombululo esipheleleyo kwiimfuno zoshishino kunye nokuzonwabisa. Le nkqubo i-portal multimedia engabandakanyi ukufikelela kwe-intanethi kuphela, kodwa kunye nemimiselo yokuzonwabisa, ngelixa abagibeli bezentengiselwano bangenza ukusetyenziswa kwe-intanethi ukuthumela nokufumana imilayezo ye-imeyile, abagibeli benjabulo banokwenza Ukusetyenziswa kwe-Multimedia Portal kwaye ufunde iphephandaba, ubukele i-movie, ufumane iindaba zakutshanje, ubukele iTV okanye uphulaphule umculo.
Iimpawu zokuzonwabisa ezibonelelwe ngeli portal zinika enye indlela eninzi kwaye zihambelana nokufunwa kwabagibeli ukusetyenziswa kwe-Intanethi, ukuququzelela umxholo we-multimedia kwiinkonzo ezinikezelweyo ezifakwe kwii-train trains. Ukuhlaziywa komxholo we-multimedia kungenziwa kusebenze ebusuku ukuze kulungiswe ukusetyenziswa kwe-broadband kwi-Intanethi, ngoko ukunciphisa nayiphi na impembelelo kumava okusebenzisa i-intanethi kumxhasi.
I-Multimedia Portal ingenziwa yenziwe ngokwempawu kunye nomfanekiso wenkampani yokuthutha izithuthi, ebonelela iqela lokubambisana elibonakalayo kubagibeli balo.
Ngokuxhomekeka koqwalaselo lwesitimela phakathi kweendidi ezahlukeneyo zokuhamba-i-Premium / iBusiness / Economy okanye yokuqala / yesibini kwiklasi - ukuyila kunye nomxholo we-portal multimedia kungahlukaniswa kwaye iguqulelwe kwiimfuno ezahlukeneyo. I-NASSAT Multimedia Portal inikeza isisombululo esiphezulu ngokupheleleyo kubaqhubi bee-train.
Amaziko eenkcukacha: Ukuxhomekeka okuphezulu kwi-intanethi kunye nokulawulwa kwenethiwekhi. Izixhobo zesikhungo sedatha ziquka ii-routers, umlilo, ii-database kunye namaseva olawulo lwenethiwekhi.
Iinkqubo zonxibelelwano: Ama-satellites kunye neSitishi seSatellite, i-Hub Equipment, i-Cellular Networks + i-Trackside Antennas.
Umnxeba wonxibelelwano Ukuhlanganiswa kwamaninzi amaninzi kunye nomqhubi woninzi-mhlaba ukwenzela ukwandisa ukufumaneka kunye nomda wokuhamba.
Ukuqeqeshwa kwabasebenzi benethiwekhi ngokukhuseleko: Unxibelelwano oluzimeleyo olukhuselekileyo lwezicelo zobuqu kunye nabaqeqeshi boqeqesho.
I-portal ngokwezifiso: Ukulungelelaniswa kuzo zonke iindidi zezixhobo - ii-laptops, iipilisi, iifowuni eziphathekayo, izikrini zomnxeba zomntu siqu-ezinika ukufikelela kwividiyo kwiimfuneko, i-TV, amaphephandaba, iingxelo zemozulu, ulwazi lokuhamba, kwakunye ne-intanethi.
Module ye IPTV: Iprotocol ye-Intanethi yeThenesi ngaphandle kokuphazanyiswa ukubukela umabonwakude ohlala kwi-300km / h.
Ikhompyula yeCinema: Ukudlala okulandelanayo kunye neetrakethi zomsindo ngeelwimi eziliqela kunye nesitimela okanye ulawulo olukude.
Ulawulo lwenkqubo: Iimodyuli zokubeka iliso, uhlalutyo, ulwazi kunye nokuphathwa.
Bandwidth Elawulwayo: I-NASSAT inikezela ngamanqwanqwa enqwanqwa-bakala ekulawulwa kwimizila engama-multiple (i-satellites, amanethiwekhi angaphandle angenazintambo ezingenantambo, i-Wi-Fi okanye i-antenna kumhlaba) kumanqanaba enkonzo avunyelwanga ngaphambili.
U msebenzi: I-24 X XUMUMX X XUMUMX, abaqhubi abodwa abazinikele ekubekeni iliso lokulawula utshintsho kunye nokungenelela okukude ukuhlalutya nokulungiswa kweephene.
Umqhubi: Ngeenkonzo ze-NASSAT Broadband, uMqhubi woThuthi unokulawula ukusetyenziswa kwezixhobo zomzila ezifana nezokuhlaziywa kweendlela zokugqibela, ukuthengiswa kwetikiti kunye nokuphathwa kwexesha lokwenene lokuphazamiseka kwezithuthi.
Ngokuqhagamshelana okuzimeleyo nokukhuselekileyo kwi-Intanethi ye-wireless, ulwazi lwexesha langempela kunye neentlawulo ze-intanethi zingathunyelwa kwaye zifunyenwe ngabasebenzi bebhodi nge-PDA okanye i-Smartphone yakho ene-Wi-Fi.
Ukulandelwa kwexesha langempela leenkonzo ze-NASSAT kwi-Intanethi. Ukulawulwa kwenkonzo ye-intanethi kunye nokunyamekwa kwayo rhoqo kuqinisekiswa yiCandelo loPhando (NOC) le-NASSAT. I-NOC iqhubekeka iliso nganye kwinqwelo yesitimela, kuquka inkqubo yoqhagamshelwano-satellite, ii-modem ze-Wi-Fi kunye ne-UMTS, ii-routers, iinkonzo kunye neendawo zokufikelela.
Inkqubo yokulumkisa ngokubanzi ikwazisa iqela lethu loLawulo lokujongana neengxaki zobuchwepheshe ezichongiweyo kwiizitim, ukuhlanganiswa kwe-intanethi kunye ne-GSM yolawulo lokude kude xa ikhonkco yesatellite ikhona. I-NOC iqokelela kwakhona iinkcukacha zokusetyenziswa, kunye neengxelo ezicacileyo zokusebenza kwazo zonke izixhobo eziphambili zesitimela.
Ukufakwa nokugcinwa kwenkqubo ye-NASSAT: I-NASSAT iye yafumana amava amaninzi ekusebenzeni nabaqhubi bee-train. Ukugcinwa kwezisombululo ze-NASSAT kusekelwe kwimigaqo elandelayo:
Nciphisa ukungenelela kwamanqanaba okunciphisa ukungenelela emzimbeni
Kubandakanya ukungenelela kwimizimba ngexesha lokugcina izitimela
Bambisana nabaqeqeshi bee-train, kubandakanywa uqeqesho kunye nokubeka iliso oluqhubekayo olwenzelwe ukusetyenziswa kwezixhobo ze-NASSAT
Le sesakhiwo yale nkqubo ixhasa ubugcisa ezininzi connectivity - satellite, cellular-high speed, wireless eriyali yokusingqongileyo Wi-Fi for kwizikhululo kwiidepho - media kwaye ongeze izithuthi ngokusebenzisa ubugcisa ezahlukeneyo kunye ezahlukeneyo, dynamically ngokulungelanisa imeko- yokusebenza channel elowo nomthamo ekhoyo njengesiseko iindleko, lo algorithm uyayazi indawo.
Ngokusebenzisa iinkonzo zoxhumano lwe-NASSAT, umqhubi ufikelela kwisisombululo esilahlekileyo nesoqoqosho sokulawula imisebenzi eyahlukeneyo.
I-broadband ye-NASSAT inikezela umqhubi wendlela yolawulo lwesicelo esiza kuvumela ukufikeleleka kolwazi oluchanekileyo olufutshane kunye nokunyusa izinga lokukhuseleko.
Ukongezelela, ukuxhumeka kwe-intanethi ezizimeleyo kunye nekhuselekile, inkokhelo ye-intanethi ingathunyelwa, kwaye ifunyenwe ngabasebenzi bebhodi ngokusebenzisa uxhumano lwenethiwekhi yakho enikwe amandla kwi-PDA okanye kwi-smartphone.
Ezinye izinto zeNkqubo
Nge "audio kwihlalo", umlawuli wevolumu kwi-headphone kunye nokudlala ezininzi.
Izicwangciso zokuthinta abantu
Izikrini ezizimeleyo ezikwi-TV kunye nevidiyo ekholayo, kuxhomekeke kwimfuno yokungena kwilayibrari epheleleyo yezinto zokuqeqesha.
Ukuzonwabisa kunye nokufikelela kwi-intanethi kuwo onke amadivayisi - ii-laptops, ii-smartphone, iipilisi, izikrini zokuthinta.
Copyright © 2008 - Wonke amalungelo agcinwe - INassat Development Satellite Systems